LIISKA Antonov An-24RV FSX & P3D - Rikoooo
downloads 22 504
Naqshad Samdim, Andrey Felis, Yevgeniy (Bleyd), saamileyda Sergey (Dzies), P3D-64 la qabsashada Rikoooo
Updated on 13 / 08 / 2019: Hagaajinta dhawaaqyada mashiinka oo aan la dhageysan karin awooda ugu badan, waxay ku dartay qaar ka mid ah cabirrada maqan, waxay ku dartay GPS GARMIN 500. La-qabsiga otomaatiga loo yaqaan 'autopilot to' Prepar3D v4. Tan iyo markii GPS KLN90B uusan la jaan qaadi karin Prepar3D v4 (64 qalliin) waxaa lagu beddelay nooc leh howlo xaddidan oo keliya loogu talagalay Prepar3D v4 (isbadal looma sameeyo FSX iyo FSX-Steam). Looma baahna inaad soo dejiso oo aad ku rakibto GPS-ka KLN90B ee adeegsadayaasha Prepar3D v4 wali looma sameyn mid la jaan qaadi kara qalabkan. Waxaad isticmaali kartaa GPS GARMIN 500 oo horay loo sii qorsheeyay.
Add-on dhigay Prepar3D v4 64-bit oo la jaan qaada Rikoooo.
Halkan waa mid kale add-on oo wakiil ka ah diyaaraddii hore ee USSR oo tayo sare leh oo cajaa'ib leh iyada oo la ogyahay inay tahay qalab bilaash ah. Antonov An-24RV waa mid heer sare ah, oo ay kujirto 4 dib u dayactir: IzhAvia, AFL, Aeroflot iyo Tjumavi. Goobaha casriga ah ee casriga ah ayaa si buuxda loogu qaabeeyey 3D, waxaad la yaabi doontaa cabirkeeda leh dhammaystirka 3D iyo qaab dhismeedka HD, waxaad fursad u yeelan doontaa inaad badasho badan oo kuxirma qaybaha kaladuwan ee qolka. Waxaa ku jira dhawaaqyada dhabta ah iyo dhaqdhaqaaqyada. Runta dhabta ah ee tan add-on waa mid aad u horumarsan.
The Antonov An-24 waa diyaarad mataanaha-turboprop ah oo awood u waday 44 in 52 rakaab macmalay ee USSR ah, (oo hadda ku sugan Ukraine) by Antonov Engineering. Diyaaradaha ayaa waxaa la filayaa in ay ku shaqeeyaan jawi lagu duubay oo ahaa gaar ahaan guul xitaa heerarka Western, si kastaba ha ahaatee ay faaiido ganacsi ahaa ku yar sababtoo ah waxaa la curyaantey mass ah mid aad u sareeya unladen.
Laba nooc muhiimad military ayaa la soo Guuriyay ahayn ka, ka Antonov An-26 la albaab weyn oo xamuul dambe iyo Antonov An-30 sanka muraayad ah korjoogteynta iyo khariidaynta ergooyinka ah. (Wikipedia)
MUHIIM: oo loogu talagalay Antonov An-24RV inuu si sax ah u shaqeeyo oo uu ka fogaado khaladaadka "ma xallin karo cabir /sc_acc.dll" waa lama huraan in la soo dejiyo oo lagu rakibo nooca ugu dambeeya ee cabbirka KLN90B (GPS), rakibidda Qalabkaan waxaa loo baahan yahay mar keliya .
Click xiriirka hoose si aad download eeg ka.
Author: Naqshad Samdim, Andrey Felis, Yevgeniy (Bleyd), saamileyda Sergey (Dzies), P3D-64 la qabsashada Rikoooo